Otu esi ahazi onwe gị ka ị mụọ isiokwu dị iche iche | Nhazi na ọmụmụ ihe
Ndị Nche Obodo
Schoolslọ akwụkwọ azụmahịa
Ọzụzụ aka ọrụ
Ihe ọmụmụ nke oge ọkọchị
Ọgwụgwụ Ọrụ Ọrụ
Ebe obibi mahadum
Job itzọ ọpụpụ
Otu esi ahazi onwe gị ka ị mụọ isiokwu dị iche iche
Maite Nicuesa | 12/01/2022 10:32 | Atụmatụ
Ọmụmụ ihe na-enweta echiche dị iche iche dabere na ụdị ọrụ ahụ. Mgbe nwa akwụkwọ na-abanye na syllabus nke isiokwu na-amasị ya, ọ na-enwe mmasị dị elu karịa mgbe ọ na-agafe ọdịnaya nke na-esiri ya ike. Ma ka o sina dị, nhazi bụ otu n'ime igodo iji nweta ihe ịga nke ọma iji nweta ebumnobi ọmụmụ n'oge usoro. Kedu hazie ịmụ ihe ọtụtụ isiokwu? Anyị na-enye gị ndụmọdụ ụfọdụ na post.
1 1. Otu esi amata oge n'isiokwu nke ọ bụla
2 2. Jiri usoro ọmụmụ na-enyere gị aka inyocha
3 3. Detuo ihe ọma
4 4. Ọmụmụ ihe kwa ụbọchị na mgbe niile
5 5. Ụbọchị ule
6 6. Nye iwu ihe
1. Otu esi amata oge n'isiokwu nke ọ bụla
Onwere nghazi kwesiri eji eme ihe. Wepụtakwuo nkeji iji mụọ na nyochaa isiokwu ndị na-eweta ọkwa siri ike dị elu. Ihe a na-ewere dị ka mgbagwoju anya na-adịkwa mgbagwoju anya karị ma ọ bụrụ na e yigharịrị oge ọmụmụ ihe maka oge ọzọ. Kedu ka esi zere na a na-emeghachi ọnọdụ a ugboro ugboro? Ọmụmaatụ, malite ehihie ma ọ bụ ụtụtụ site n'isiokwu nke ị ga-achọ itinyekwu ohere.
2. Jiri usoro ọmụmụ na-enyere gị aka inyocha
Nyochaa bụ isi mgbe ị na-enyocha isiokwu dị iche iche n'otu oge. Usoro mmụta ndị ahụ na-enyere gị aka inyocha echiche ndị enyochalarị dị mkpa iji mee ka mmụta sikwuo ike. Nhazi, maapụ echiche, na nchịkọta dị mma. Ma na-egosikwa ebe ọ bụ na, site n'iji anya na-emepụta echiche ndị bụ isi nke ederede, ị na-ahụ ha n'ụzọ dị mfe.
3. Detuo ihe ọma
Were ndekọ nke akụrụngwa ndị ga-eso gị n'oge atụmatụ mmụta gị. Ihe ndetu ndị ahụ bụ ezigbo nkwado na isiokwu ndị bụ akụkụ nke akwụkwọ. Ihe ndetu ndị na-emesi echiche ndị bụ isi ike bụkwa isi ihe na-eme nyocha ahụ. N'aka nke ọzọ, a na-atụ aro ka ị mụọ site na nkọwa nke gị.
4. Ọmụmụ ihe kwa ụbọchị na mgbe niile
Enwere njehie nhazi nke na-emepụta mmetụta na-adịghị mma na obere oge na ogologo oge: ịhapụ ọmụmụ ihe maka ụbọchị tupu ule ahụ. Otú ọ dị, iji mee ka ọtụtụ isiokwu dị ọhụrụ, ọ dị mkpa ịnọgide na-agbanwe agbanwe n'ime izu. Kedu otu esi achọta oge na ohere maka isiokwu ọ bụla? Mepụta kalenda wee jiri anya nke uche hụ atụmatụ ikpeazụ ị ga-atụ anya usoro a na-eme nke ụbọchị ole na ole sochirinụ. Kalịnda a ga-agbanwerịrị ma meghee maka mgbanwe enwere ike. Buru n'uche na nzukọ a bụ mmụta nke ị nwekwara ike mejuputa mgbanwe ndị nwere ike ime.
Kedu atụmatụ gị maka taa? Akwụsịla ya ruo echi.
5. Ụbọchị ule
Buru n'uche akụkụ dị iche iche mgbe ị na-eme atụmatụ ọmụmụ ihe. Nke mbụ, chọpụta usoro ihe ndị ka mkpa ma mepụta nzukọ nke dabara na atụmanya ndị ahụ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ụbọchị nke ule n'onwe ha na-enweta mkpa pụrụ iche na usoro ahụ. Dịka ọmụmaatụ, n'ụbọchị ndị ga-eduga ule na-abịanụ, lekwasị anya nke ukwuu na isiokwu ahụ.
6. Nye iwu ihe
Ọmụmụ ihe ọmụmụ dị iche iche chọrọ nhazi oge kacha mma. Òtù bụ isi ihe na-emepụta atụmatụ ime ihe n'usoro. Kedu ka esi eme ka usoro mmụta dị mfe? A ghaghị imegharị gburugburu ebe obibi na mkpa nke nwa akwụkwọ. Lekwaa ihe ọmụmụ ahụ ma nye iwu ndetu nke isiokwu dị iche iche.
Akpa akwụkwọ bụ ihe dị mkpa nke ngwá ụlọ iji wuchaa oche ma mepụta ikuku nke itinye uche. N'ụzọ dị otú a, na gburugburu ebe obibi dị nso na tebụl ị nwere ike ịchọta isi mmalite nke ozi ị kwesịrị ịkpọtụrụ.
Gịnịkwa ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na i chere na ị naghịzi enwe ohere iji mụọ isiokwu niile? N’ihi ya, ike agwụla ha niile. Kpebie ihe mgbaru ọsọ ịchọrọ ilekwasị anya na ihe kpatara ya. Hazie usoro ihe kacha mkpa gị.
Kedu otu esi ahazi onwe gị ka ị mụọ isiokwu dị iche iche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Noticias » Atụmatụ » Otu esi ahazi onwe gị ka ị mụọ isiokwu dị iche iche
Kedu ihe bụ Criminology?
Otu esi agụ akwụkwọ na ngwụcha izu
Nata ihe omuma kachasi nma banyere ihe omumu na omumu na email gi.